🥇 ▷ Wadaagista Qoyska, waa muuqaal cusub oo ah macruufka 8 ee wadaagista waxyaabaha la wadaago ✅
Wadaagista Qoyska, waa muuqaal cusub oo ah macruufka 8 ee wadaagista waxyaabaha la wadaago
Apple waxay soo bandhigaysaa muuqaalka cusub ee loogu talagalay ‘iOS 8’ oo loogu talagalay qoyska, Wadaagida Qoyska
Intii lagu guda jiray furitaanka furaha ee lagu furay furitaanka Shirweynaha Horumarinta Adduunka, Apple waxaan ku soo bandhigayaa dhowr astaamood oo cusub oo ah iOS 8, nooca cusub ee nidaamka hawlgalka mobilada ee iPhone iyo iPad. Astaamahaas waxaa ka mid ah wicitaan aad u xiiso badan Wadaagida qoyska, kaas oo u oggolaanaya adeegsadayaasha reerka inay sifiican isku xirnaadaan una fududeeyaan habka ay wadaagaan dhexdooda. Faahfaahin intaa ka badan ka ogow astaantan cusub, ee noo socota, xagga hoose.
Waa maxay Wadaagista Qoysku?
Wadaagida qoyska waa muuqaal cusub oo aad soo bandhigtay Apple Nooca cusub ee nidaamka hawlgalka mobilada ee loogu talagalay iPhone iyo iPad, macruufka 8. Muuqaalkaani wuxuu ina siinayaa dariiqa loo maro, hab, wada noolaanshaha nolosha dijitaalka ah ee qoyskaaga, tan waxaa ka mid ah dhammaan noocyada kala duwan ee macluumaadka ku jira warbaahinta, sawirrada, muusikada, dukumiintiyada iyo xitaa codsiyada.
Muuqaalkan cusub ayaa lagu fulin karaa inta u dhexeysa illaa lix qof oo qoyskaaga ah oo aad kula wadaagi karto dhammaan wax iibsiyada aad ku sameyso iTunes, iBooks, iyo App Store iyada oo aan loo baahnayn in la wadaago isla xisaabtan. Intaas waxaa sii dheer, waxaad ku bixin kartaa iibsigaaga isla kaarka deynta oo aad ku ansixisaa kharashka, haddii ay dhacdo in iibsigu uu sameeyo cunug, aaladda waalidka. Tan kaliya maahan, waxay sidoo kale si fudud u wadaagi karaan sawirrada, lahaan karaan jadwal qoys, iyo xulashooyin kale oo badan oo ka caawin doona dhammaan xubnaha inay xiriirkooda ku xirnaadaan.
Kadib markii la sameeyo qaabeynta wadaaga qoyska, lana wadaagaya Qoyska, dhammaan xubnaha qoyska ee ku xiran waxay awood u yeelan doonaan inay si otomaatig ah isla mar ahaantaasna u galaan nuxurka mid kasta, taasi waa, waxay awoodi doonaan inay daawan karaan filimada, barnaamijyada telefishanka, Buugaagta iyo codsiyada.
Tilmaamaha ugu muhiimsan ee iOS 8 Wadaagida Qoyska
Shaqadan cusub ee aadka u wanaagsan ayaa lagu qalabeeyay astaamo xiiso leh oo ka dhigaya tan mid ka mid ah waxyaabaha ay qoysasku jecel yihiin macruufka 8 aad u badan iyo adeegsiga aaladaha mobilada ee Apple (iPhone, iPad). Waxaa ka mid ah astaamaha ugu muhiimsan ee aan soo bandhigi karno:
Sawirro: Wadaagidda Qoyska waxay gacan ka geysan doontaa soo ururinta iyo wadaagga sawirrada qoyska si fudud. Muuqaal loo habeeyay si otomaatig ah kaas oo noo oggolaanaya inaan wadaagno sawirrada, fiidiyaha iyo faallooyinka. Wax kasta oo aaladaha ka dhigaya dhammaan aaladaha ay la socdaan sawirradi ugu dambeeyay (fasaxyada, maalmaha dhalashada, iwm.) Ee dhammaan xubnaha qoyska, adigoon u dhowaan.
Jadwalka taariikhda: Doorashadan cusub waxay u oggolaaneysaa dhammaan aaladaha lagu habeeyey doorashadan, Wadaagidda Qoyska, in la isticmaalo jadwal wadaag ah oo loogu talagalay qoyska oo keliya. Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad dejiso xusuusinta dhammaan xubnaha qoyska, taas oo ka soo muuqan doonta dhammaan aaladda waqtiga saxda ah ama meesha horey loo dejiyay.
Raadi asxaabta: Wadaagida Qoysku si otomaatig ah ayey ula wadaageysaa goobta xubnaha qoyska sidoo kale waxay tusi doontaa meesha ay joogaan.
Baadh Iphone -kayga: Muuqaalka xiisaha leh wuxuu hadda u oggolaanayaa dhammaan aaladda qoyska inay gacan ka geystaan ​​raadinta aaladaha lumay, taasoo fududeyneysa helitaanka aalado lumay. Thanks to Find the app my iPhone, xubnaha qoysku waxay u isticmaali karaan aaladda macruufka ay ka heli karaan qalabka lumay, xitaa waxay ku dhaqaaqi karaan xulashooyinka goobta aad haysatid barnaamijkan, sida ka dhigista inuu ciyaaro cod, xitaa haddii aaladda aamusnaanta ku jirto.
Kontroolka waalidka: Xulasho ayaa ugu horeyn loogu talagalay waalidiinta, kaas oo iyaga siiya xakameyn ballaaran, halka carruurtu ay dareemaan inay leeyihiin xuriyad dheeraad ah. Wadaagista Qoyska dhammaan iibsiyadaha waxaa lagu xiriirin karaa hal kaar oo qoyska oo dhan, marka lagu daro, waxaan ku dhaqaajin karnaa ikhtiyaarka u oggolaanaya «weydiiso wax iibsasho» oo u oggolaaneysa carruurta, marka qalabka kuwaan ka iibsan doono iTunes, iBooks. , ama wax ku iibsashada App Store, ka hor intaadan dhamaysan, weydii waalidka aaladda. Xitaa carruurta ka yar 13 sano jirku waxay lahaan karaan kaarkooda aqoonsiga ee Apple sidaasna qeyb ayey uga noqon karaan.
Xaqiiqdi, Wadaagida qoyska Waa muuqaal dhammaystiran oo aad u xiiso badan oo loogu talagalay in lagu mideeyo qoysaska in ka badan iyada oo loo marayo aaladda iOS 8 ee ku habboon ayada oo ay ugu mahadsan tahay suurtagalnimada hay’addeed ee ay wadaagaan dhammaan xubnaha qoyska.